आज दशैँको मुख्य दिन विजयादशमीः कति बजे टिकाको उत्तम साइत ? « Salleri Khabar
आज दशैँको मुख्य दिन विजयादशमीः कति बजे टिकाको उत्तम साइत ?
२९ असोज, काठमाडौँ । नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँको दसौँ अर्थात् मुख्य दिन आज आफ्ना मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्षोल्लासका साथ विजयादशमी पर्व मनाइँदैछ ।
विजयादशमीका दिन आज बिहान ८ः१९ बजे देवी विसर्जन र बिहान १०ः०२ बजे टीका लगाउनका लागि शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले दिए ।